R/wasaaraha oo la kulmay wafdi ka socday dalka Burundi – idalenews.com
R/wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa maanta kulan la qaatay wafdi ka socday baarlamanka dalka Burundi kuwaas oo muddo sadax maalin ah ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Kulankan uu maanta R/wasaaraha jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya la qaatay wafdiga ka socday baarlamanka dalka Burundi oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha gudiga difaaca baarlamaanka dalkaasi iyo xildhibaano katirsan baarlamanka dalka Burundi oo maalmahan kusugnaa magaalada Muqdisho, waxaana kulanka looga wada hadlay xiriirka labada dowladoodo iyo arrimo ku saabsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi ee howlgalka milatari ka wadan dalkeena.
Markii uu soo gaba gaboobay kulankii maanta R/wasaaraha dalka la qaatay wafdiga xildhibaanada ah ee kasocda dowladda Burundi ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka koowaad ee dalka Mudane Cabdi Faarax Shirdoon waxa uuna sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal.
Sidoo kale R/wasaaraha ayaa intaasi ku daray in wafdiga ka socday dalka Burundi ay dowladda Soomaaliya uga mahad celiyay sida wanaagsan oo ay ula dhaqmeen shacabka Soomaaliyeed.
Wafdigan ka socda dowladda Burundi oo maalintii Axada aheyd soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa shalay kulan la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya iyo afhayeenka baarlamanka waxaana la filayaa in maalinta Jimcaha ay dib ugu laabtaan dalkooda inta ay joogane waxa ay kulamo la qaadan doona saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqisho iyo mudaneyaal ka tirsan baarlamanka.
Askari ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu dilay Mandheera